Tokony hatahotra ny mpino silamo ve isika ? - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Matahotra daholo, hono, ny olona eto Frantsa taorian’iny famonoana ireo mpanao gazetin’ny “Charlie Hebdo” nataon’ireo mitonona ho “islamista – jihadista”, ny alarobia 7 janoary 2015 lasa iny. Matahotra ny Jiosy ka te hiverina any Israely. Matahotra ny Silamo fa toa voatondro molotra, mpiray tsikombakomba, ho lazaina fa fahavalo. Matahotra koa , hono, ny kristianina sao misy misy mandrangitra adim-pinoana. Matahotra koa ny mpiavy fa sao miteraka fankahalana vahiny izao. Matahotra ny rehetra fa ny Repoblika no tian-kovonoina izay tsy mampifandrafy ny Fanjakana sy ny Fivavahana, fa mampisaraka izany, ilay hoe “laïcité”. Koa mitombona ve ny tahotra ary aiza ny fototr’izany tebiteby izany. Fanadihadiana.
Nivarahontsana ny rehetra nandre ny filazam-baovao ny marain’ny alarobia 07 janoary 2015 fa mpanao gazety folo avy ao amin’ny gazety mpanao sary hatsikana “Charlie Hebdo” eto Paris (75) nandritra ny “conférence de rédaction” no notifirin’ireo mpampihoroho mitonona ho “islamista jihadista” , valifaty tamin’ny fanevatevana natao tamin’ny mpaminany Mahomet, hoy i Saïd sy Chérif Koauchi nahavanon-doza. Nisy koa polisy roa maty tamin’io andro io. Ny ampitso alakamisy 08 janoary dia mbola nisy famonoana polisy iray tany Montrouge (92) sy Jiosy efatra tao amin’ny tranombarotra hyper casher tao Porte de Vincennes (94) nataon’I Amédi Coulibaly. Nisy koa ireo naratra. Niarafara tamin’ny fifandonana tamin’ny mpitandro filaminana moa izany ka nahafaty azy telo mirahalahy ireo. Ary efa voalevina daholo ny maty fa ny velona no mametraka fanontaniana : fa inona marina no anton’izao zava-doza izao ?
Ny 17 desambra 2010 dia nandoro tena ilay zatovolahy tonizianina iray, Mohammed Bouazizi, mpanao varo-mandeha rahefa nalaina taminy ny kalesa kely sy fandanjana fitaovam-piasany ka tsy naverina taminy. Io no vanja nampirehitra ilay hoe “Printemps arabes”. Hetsika tsy manampaharoa no niseho hatrany Tonizia ka nipaka tao Ejypta vao nihitatra tany Libye, Bahrein, Yémen ary Syrie. Tany silamo daholo ireo na ny maro an’isa ao aminy ary misy jadona politika avokoa. Mangetaheta demokrasia ny vahoaka arabo. Vokatr’izany dia nandositra ny Filoha Ben Ali tany Tonizia, niongana koa ny Filoha Moubarak tatsy Ejipta ny volana janoary 2011 daholo izany ; maty novonoina I Khadafi volana oktobra 2011, izay nandraisan’ny Angilisy sy Frantsay anjara tamin’ny zera bomba. Mbola ady an-trano ao Syrie hatramin’izao ary tany tsy misy fanjakana any Yémen izao. “Avotra” ny mpitondra tao Bahrein satria niditra Arabie Saoudite ary nikipy maso ny Amerikanina satria ny solitany no arovana. Ao Bahrein rahateo no misy ny Etamazaoro miaramila amerikanina misahina iny Afovoany Atsinanana iny (Moyen-Orient).
I Tonizia irery no afaka niroso tamin’ny fifidianana malalaka ary koa I Ejypta. Saingy ireo antoko islamista no nandresy Ennhada tao Tonizia ary Frères Musulmans tany Ejypta. Avy hatrany anefa izy ireo dia nampiditra ny lalàna islamika (charia) ifampifehezana ka nihetsika indray ny vahoaka satria tsy izany no mahamaika. Nanao fifidianana malalaka fanindroany indray tany Tonizia ny volana oktobra 2014, ary nandresy ny Vondron’Antoko Laika (NidaaTounes), ary resy ny Antoko islamika Ennahada. Efa mijoro ny governemanta demokratika any Tonizia ny 23 janoary 2015 lasa teo.
Ny tao Ejypta kosa dia ny miaramila no nanongam-panjakana, notarihan’I Maréchal Al-Sissi ny volana jona 2013, izay nisy ireo mpitondra islamista, voafidy araka ny fomba demokratika dia ny Frères musulmans notarihan’I Mohamed Morsi. Nikipy maso koa eto ny Amerikanina satria akaiky loatra an’I israely I Ejypta ka tsy tsara misy fitondrana islamista. Avy moa narahina fifidianana izany. Koa tsy ny fanonganam-panjakana akory no ratsy na ny demokrasia no tsara eo imason’ny Tany Tandrefana fa ny hoe : aiza no misy ny tombontsoany.
Araka izany dia misy ifandraisany na fiantraikany foana ny raharaha anatin’ny firenena iray sy ny fifandraisana diplomatika. Misy tarazo ara-tantara izany fony mbola teo ny fanjanahantany. Nisy ny fifaninana nifanaovan’ny Anglisy sy ny Frantsay teo amin’izay sehatra izay. Ny Anglisy no azo lazaina fa nifehy ny solitany tao Afovoany Atsinanana. Samy manana ny ambandaina ireo firenena roa mpanjanaka ireo eran’izao tontolo izao, fa ny Anglisy no manatombo. Sarona eo amin’ny fifaninana misy eo amin’izy roa tonta ny ny tena tolom-bahoaka ho an’ny demokrasia. Raha vao nijoro ny Firenena israelianina ny taona 1948 dia niova tanteraka ny “géopolitique”, satria teraka koa ny “nationalisme arabe” izay nohetsiketsehan’I Nasser tao Ejypta, sady manohana ny fampijoroana ny Fanjakana Palestianina. Fanjakana roa no natsangan’ny Firenena Mikambana : Israely sy Palestina. Fa nolavan’ny tany arabo ny fisian’I Israely. Dia izao mbola lovana izao ny disadisa ady tany.
Lasa ireo izany no hery manosika ny tolona arabo : fandrodanana ny Fanjakana israelianina ary fananganana Fanjakana palestinianina. Raha nalaini’I Nasser ho fananam-pirenena ny lakandranon’I Suez ny taona 1956, dia nisy ny tamba-be nataon’ny Anglisy sy ny Frantsay ary ny Israelianina. Rahefa nandrahona ny Sovietika dia nijanona izany. Manomboka eto dia lasa fifaninana eo amin’ny Amerikanina sy ny Sovietika ny sehatra diplomatika eran-tany na dia eo ihany aza ny Anglisy sy ny Frantsay fa efa manangasanga koa ny Sinoa amin’izao fotoana izao, izay tsy tia herisetra loatra fa mihinana milamina fotsiny.
Tsy nahomby anefa hatramin’izao io tolona arabo io na eo anivon’ny vahoaka na eo amin’ny sehatra diplomatika ka dia lasa ny fivavahana silamo no ianteheran’ny olona ka araraotin’ireo manembona ny taloha fony natanjaka izany, tamin’ny andron’ny Fanjakana Ottomans (Torkia ankehitriny) ka nisy ny antsoina hoe : Califats. Ny tany tandrefana lehibe miaro ny tomboantsoany ara-toe-karena moa ny tany arabo miaro ny fivavahany mba itrakany, fa ny vahoaka arabo mangetaheta demokrasia sahaza azy. Mifanjevo ny fanarahana ny toe-draharaha. Fivavahana silamo sy diplômasia. Ny Amerikanina manohana ny Arabie Saoudite, tany mpamokatra voalohany solitany, kanefa isan’ny mpampiatra ny tena fomba silamo entitra dia ny wahhabisme, sady toerana misy an’I La Mecque. Toerana voalohany fanaovan’ny Silamo Fivahiniana Masina. Mavesa-danja araka izany I Arabie Saoudite. Mpamatsy vola hanaovana ny Mosquées sy mandefa imams any amin’ireo toerana misy silamo. Voakasik’izany ny aty Eorôpa.
Adin’ny samy Silamo
Satria misy fifandrafiana eo amin’ny Silamo, dia ny Sunnites maro an’isa sy ny Chiites vitsy an’isa dia ireny koa no zary fitaovana ampiasain’ny tany lehibe iarovana ny tomboantsoany. Ampatsiahivina fotsiny fa tsy nanam-potoana nanendrena izay hisolo azy ny mpaminany Mahomet alohan’ny nahafatesany, maty tampoka, matin’aretina. Loharanon’ady tsy mety vita teo amin’ireo milaza azy ho mpandimby izany. Ny fototr’olana izany dia ny fifandimbiasana taorian’I Mahomet. Ireo milaza fa ny fianakavian’I Mahomet ihany no mpandimby no Chiites raha fintinina amin’ny ankapobeny, ary ny Imam no sady lehibe ara-piaraha-monina (chef politique) sy ara-pivavahana (guide spirituel). Avy eo moa dia arahina tsangan-kevitra sy rohin-kevitra ara-pivavahana izany mba hanamafisana ny rindran-damina sy fitantanana antanatohatra (hiérarchie) ifampifehezana.
Ireo rindran-kevitra notovozina tamin’ny Coran (boky masin’ny Silamo) sy ny fampianarana avy amin’izany no navondrona, antsoina hoe : Sunna. Sunnites ireo silamo mpanaraka izany dia saika ny rehetra. Ny lehiben’ny Silamo no antsoina hoe Calife (khalifat), izany hoe mpandimby an’I Mahomet. I Abou Bakr no Calife voalohany, namany akaiky sady rafozan-dahiny. Ny taona 1924 no tsy nisy intsony izany Calife izany. Rava ny Fanjakana Ottoman ary teraka ny Firenena tiorka vaovao (Turquie ankehitriny). Rahefa nandresy ny revolisiona islamika iranianina tamin’ny taona 1979 dia ny Ayatollah Khomeyni no Lehibe fara-tampony eo amin’ny tany sy ny fanjakana. Manomboka eto ny resaka Repoblika Islamika. Fifandonana tsy mety vita eo amin’ny Sunnites sy ny Chiites. Iran sy Irak izany no tena misy ny Chiites sady maro an’iisa rizareo. Ny tany silamo rehetra dia saika Sunnites daholo. Rahefa niorina ny Al Qaïda notarihan-dry Ben Laden, taorian’ny fidiran’ny sovietika tany Afghanistan ny taona 1979, no azo lazaina fa teraka ny tena fampihorohoroana (terrorisme islamique), miainga amin’ny fankahalana ny tany tandrefana manohana an’I Israely sy ny komonisma ary ny Chiites, sy ireo mpitondra arabo miray tsikombakomba azy ireo. Fanoherana ny tsindry azo lena, hoy ny fiteny, ka amporisihana ny ady masina “djihad”. Misy azy ireo ankehitriny manomboka any Mauritanie, Mali, Niger, Libye, Nigéria, Centrafrique, Soudan, Yémen, Afghanistan, Pakistan.Ireo ilay antsoina hoe: “arc terroriste”. Mahafotaka ny ato Moyen-Orient satria nanangana “Etat Islamique” ny mpampihorohoro, mpifanina amin’ny Al Qaïda, hamerenana ny Califat taloha, hono.
Famaranana fa tena lavabe dia ny hoe: tsy ny fivavahana silamo akory no mandrehitra afo, fa ireo vondron’olona na antoko (jamat) mpampihorohoro toy ny AQMI atsy Afrika avaratra, ny Boko haram ao Nigéria, sns. Ny Al Qaïda ao Moyen-Orient. Satria I Frantsa no tany eoropeanina be silamo indrindra, ka isan’ny toerana iasan’ireto “islamista djihadista” ireto, ireo tanora frantsay Arabo na Afrikanina fiaviana. Mahatsiaro voahilika ara-piaraha-monina izy ireo. Any izany no vaha-olana karohina fa tsy ny fankahalana fivavahana silamo, na tahotra. Ilaina ny fanamafisana ny fifanatonan’ny fivavahana silamo sy ny fivavahana kristianina ho amin’ny fiaraha-miasany sy ny fifankahalalany bebe kokoa (dialogue islamo-chrétien). Eo koa moa ny fivavahana jody. Ny fanontaniana dia hoe : mahazaka ny fisian’ny demokrasia sahaza azy ve ny fivavahana silamo ? Tadidio fa ny vahoaka silamo no be maty amin’izao zava-mitranga izao. Iaran’ny mafy indrindra.